11.11 Sale Archives - Shop
Shop > All Articles > 11.11 Sale
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ 2020 11.11ပွဲတော်ကြီးကို Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ0660
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဘာဝယ်ရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် စျေးဝယ်လမ်းညွှန်0686
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ?0591
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ?0573
What is 12.12 The World’s Biggest Sale 2020?0524
What should you buy in 11.11 Biggest Sale 2020?0445
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲကြီးမှာဘာတွေဝယ်သင့်လဲ?0594
Shop bring back the world’s biggest sale 11.11 to Myanmar0362
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ 2020 11.11 The World’s Biggest Sale ကို Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ0376
The KaungHtet October 14, 2020 12:58 pm October 21, 2020
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေသီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ Shop Anniversary ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Shop Anniversary 2020 ပွဲတော်ကြီးနဲ့ 9.9 Super Sale 2020 ပွဲတော်ကြီး ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုဟာမကြာမှီရောက်ရှိလို့လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
ကျောင်းသုံး လက်တော့ပ်တွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့အချက်များ0431
ကျောင်းသုံး လက်ပ်တော့ တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် တော့ အနည်းဆုံး CPU – Coe2Duo ပါတဲ့ လက်ပ်တော့လေးတွေဝယ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျောင်းစာတွေကို သေချာမှတ်ထားနိုင်ဖို့အတွက် RAM အနည်းဆုံး 2GB ပါတာလေးတွေသုံးသင့်ပါတယ်။ HDD ကတော့ …
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔 3084